आजको राशिफलः- बि.स. २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर ०९ तारीख… – पुरा पढ्नुहोस्……
आजको राशिफलः- बि.स. २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर ०९ तारीख…
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर ०९ तारीख कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथी अनुराधा नक्षत्र शोभन योग वालव करण चन्द्रमा वृश्चिक सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, यम पञ्चक तिहार यम द्वितीया भाईटीका विश्व स्वतन्त्रता दिवस
बाणीका कारण निकटतम ब्यक्तिहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । गैर ब्यक्तिको बिस्वासमा गरीएका कार्यमा सजग रहनुहोला सामान्य अपजस को सम्भाबना रहेकोछ । खानपानमा बिषेश साबधानि अपनाउनु होला ।
जीबन साथिको सहयोगमा गरीएका कार्य बाट मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । ब्यापार ब्यवसाय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ ।
अरुको कार्य लापरबाहि को प्रतिफल तपाईलाई आईपर्न सक्नेछ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साजेदारी ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वास नर्गनु राम्रो हुनेछ । कुराकाट्ने ब्यतिहरुबाट बच्नु पर्ने छ ।
पारीवारिक साथ सहयोमा गरीएका कार्यहरु दीर्घकालिन फाईदाका श्रोत साबित हुनेछन । पति पत्नि बिचको सम्बन्धमा सामान्य खटपट रहने सम्भाबना रहेको छ । कार्यक्षेत्रको लगन सिलतामा बृद्धि हुनाले मान सम्मानको योग रहेको छ ।
मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । मित्र जनको साथमा कमि रहला ।
मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायको साजेदारीमा भने समान्य असमन्जसता उत्पन हुन सक्नेछ । कार्य धैर्यताका कारण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ । खानपानमा सजग रहनु होला ।
मानसिक चन्चलताका कारण मित्रजन सगँको सम्बन्धमा फाटो आईपर्नेछ । जिबन साथीको सहयोमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा लाभ प्राप्त हुनेछ । नयाँ लगानि तथा साजेदारीकार्यका क्षेत्रमा भने उत्तम समय रहनेछ ।
अध्यन अध्यापनका सन्दर्भमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ । प्रतिपक्क्षी तथा प्रतीस्पर्दीहरुको बृद्धि हुन सक्नेछ । नयाँकाम प्रारम्भ गर्नका लागी समयले साथ दिएको छ तथापि साजेदारी काममा भने सजग रहनु राम्रो रहनेछ ।
मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्रको सम्भाबना रहेको छ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । सन्तान सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ ।
सामान्य यात्रा पस्चात मान सम्मानको प्राप्ती हुन सक्नेछ । मान्यजनको सहयोग द्वारा भाग्योदयको योग रहनेछ । मित्रजनको अति सामीप्यतामा अहित हुन सक्नेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा भने सामान्य समस्या उत्पन हुनेछ । – ज्योपं. सरोज घिमिरे /
Prevछोरीलाई जिताउन निलिमाकी आमाको यस्तो आग्रह-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
Nextसबैको बत्ती बनेका राष्ट्र सपुत कुलमानलाई अर्का राष्ट्र सपुत रबि लामिछानेले गरे यसरी सलाम ! हेर्नूहोस यो बिषेष भिडियो।
राधिका तामाङको माग एउटा, हल्ला अर्कै ! (बिबरण सहित हेर्नूहोस)
गोल्डेन माइक पाएर सिधा ‘गाला राउण्ड’ पुगेकाहरुले कस्तो गाए ? हेर्नुहोस आजको नेपाल आइडलको ताजा इपिसोड (पुरा भिडियो सहित हेर्नूहोस)
गोरेको बयान : ‘म भन्दा माथि काम गर्ने अरु नै छन्, एसएसपी श्याम खत्रीलाई पक्रनुस्, सबै खुल्छ’ -पुरा खबर हेर्नुहोस
श्रीमतीको निधन संगै बिग्रदै मदनकृष्णको स्वास्थ्य, छातीमा ब्याट्री राखियो, रिमोटबाट चलाउनुपर्छ (भिडियो)